AQRISO: Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato xiddiga cusub ee Arsenal Granit Xhaka – Gool FM
AQRISO: Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato xiddiga cusub ee Arsenal Granit Xhaka
Byare May 27, 2016
(London) 25 Maajo 2016. Arsenal ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay inay la soo wareegtay Xiddiga qadka dhexe ee naadiga Borussia Monchengladbach Granit Xhaka kaddib afar sano uu ka soo ciyaarayay horyaalka Bundesliga.
Waxaan jeclaysanay inaan dib idin kula wadaagno qoraalkan aan ka qornay waxyaabaha aad uga baahnaan karto laacibka cusub ee Arsenal kaa oo aan horey bogga ugu soo daabacnay afar maalmood ka hor.
Haddaba aqriste waxaan halkan kugu heynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay Granit Xhaka.
Xhaka ayaa ku dhashay magaalada Basel ee dalka Switzerland bishii 27-kii September 1992, waxaa iska dhalay waalidiin Kosovo Albanian kuwaa oo ka soo guuray Kosovo isla markaana yimid Switzerland wax yar uun ka hor dhalashadiisa.
Xhaka waa nin dheer oo ka ciyaara qadka dhexe kuna ciyaara lugta bidix, baasas halis ah dhiiba iyo shaqo adag, waxay sifooyinkiisaas soo jiiteen tababaraha Liverpool Klopp iyo midka Arsenal Wenger.
Naadiga FC Basel ayaa 2002-dii kala soo wareegtay kooxda dariska ee Concordia Basel, halkaa uu kooxda dhalinyarada ka garab ciyaarayay walaalkii Taulant.
Xhaka wuxuu matalay xulka qaranka Switzerland ee heerarka 17-jirada, 18-jirada, 19-jirada iyo 21-jirada. xulka ay da’doodu ka yartahay 17-jirada ayuu kula guuleystay FIFA World Cup 2009-kii.
Wuxuu qeyb ka ahaa kulan ay kooxdiisu Basel 3-3 la gashay Man United wareega group-yada Champions League ee xilli ciyaareedkii 2011-12 .
Wuxuu kaloo qeyb ka ahaa kooxdii Basel oo ay garoonkooda uga soo adkaatay Man United bishii December 2011.
Xhaka walaalkii Taulant, waa 24-jir daafaca uga ciyaara kooxda Basel iyo xulka qaranka Albania.
Xhaka ayaa adduun dhan 6.5-milyan ugu wareegay kooxda ka ciyaarta Bundesliga ee Borussia Monchengladbach bishii May 2012 heshiis shan sano ah.
Tababarihii hore ee kooxda Basel Thorsten Fink ayaa mar yiri: “Xherdan Shaqir waa kan ugu xirfada badan Switzerland kaddib Granit Xhaka”.
Xhaka waxaa gacantiisa bidix ku sawiran Tattoo (Sawirka jirka) kaa oo u qoran ‘BoB 92’, iyadoo uu xushmad iyo jaceyl ugu muujinayo saaxiibkii ugu qaalisan ee Patrik iyo sanadkii ay dhasheen.
Xhaka ayaa matalay xulka Switzerland ee 21-jirada ee guul darada kala kulmay xulka Spain ciyaartii final ka European Championships ee ka dhacday Denmark, waxaa xulkiisa lagu maray 2-0.
Xhaka ayaa ciyaaray kulan uu xulkiisa Switzerland Wembley kula ciyaaray xulka England bishii Jun 2012 isreeb reebkii Euro, 2-2 ayay ciyaartaa ku idlaatay.
Xhaka ayaa isku dayay 1,183 baas horyaalka Bundesliga ee kal ciyaareedkan waa laacibka shanaad ee ugu baaska badan horyaalkaas.
Lambarkii ugu horreeyay uu xirto waayihiisa xirfalenimo wuxuu ahaa NO. 34, waana Lambar uu u qaato koox kasta oo uu ku biiro, iminkana waxaa la filayaa in isla lambarkaa uu u xiran doono kooxda.
Waxaa kuu diyaariyay: Cabdisamed Maxamed Xasan (Black Yare).
EEG FARIINTA: Jose Mourinho waa macallinka cusub ee Man United
Daawo xiddigaha England oo ku kulmay Manchester kahor kulanka is kululeyska ah ee ay la leeyihiin Australia